कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी नै किन र कसरी? - Khabarshala कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी नै किन र कसरी? - Khabarshala
यस लेखमा कृषि सहकारीको बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ । कोरोना महामारी र देशको गरिबीले कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको माग गरेको छ । विश्व संकटको यो घडिमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रभावित बनाउने छ । छरिएर रहेको पूँजीलाई परिचालन गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्र लामो समयसम्म प्रभावित हुनेछ । यसले आयात र उपभोगमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि कृषि क्षेत्रको दीगो विकास अपरिहार्य छ ।
कृषि क्षेत्रमा सहकारी विधि ज्यादै प्रभावकारी हुने भएकोले यस लेखमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहकारी परिचालनको लागि कस्तो प्रबन्ध हुनु पर्छ ? लेख त्यसैमा केन्द्रित छ ।
२०७३/०७४ को तथ्यांक अनुसार सहकारीको संख्या ३४ हजार नाघेको छ । यसभित्र कृषिको नाम जोडिएर १३ हजार कृषि सहकारी दर्ता भएका छन् । कृषि सहकारीको नामबाट स्थापना भएका १० हजार सहकारी संस्थाहरुमा २ लाख ७२ हजार मात्र सदस्यता रहेको छ । नामले कृषि भएता पनि यस्ता सहकारीहरु पनि बचत तथा ऋणकै कारोबारमा सिमित रहेको पनि देखिएको छ । वस्तुका आधारमा दर्ता भएका करिब १६ सय दुग्ध सहकारी, १९० तरकारी तथा फलफूल सहकारी, १५५ कफी सहकारी, १ सय चिया सहकारी, ९० मह उत्पादक सहकारी आदिलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ । जडिवुटी उत्पादनको क्षेत्रमा पनि सयको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । वस्तुमा आधारित सहकारीहरु पनि उपयुक्त नीतिको अभाव र विभेदका कारण फस्टाउन सकेका छैनन् ।
कारोबार र सदस्य संख्याको आधारमा करिब ९ सय साना किसान सहकारी संस्थाहरुमा ८ लाख भन्दा बढि ग्रामीण परिवार जोडिएका छन् । यी सहकारीहरुको मुख्य कारोबार पनि बचत तथा ऋण नै हो । गत आर्थिक वर्ष यी सहकारीहरु मार्फत ५० अर्ब लगानी भएको छ । लगानीको ठूलो अंश कृषि क्षेत्रमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कम्पनी ऐन बमोजिम २०५८ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको साना किसान विकास लघु वित्त संस्थाले साना किसान सहकारी संस्थाहरुलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
लघु वित्त संस्थामा साना किसान सहकारी संस्थाहरुको ४४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । यस संस्थालाई बेला बेलामा नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नगन्य ब्याजदरमा सापटी दिने गरेको छ । यस संस्थाबाट गत आर्थिक वर्ष साना किसान सहकारी संस्थाहरुलाई थोक कर्जा वापत २० अर्ब उपलब्ध भएको छ । यस बाहेक सरकारी वा अन्य कुनै श्रोतबाट सहकारीमार्फत कृषिको क्षेत्रमा सरल र सहज कर्जा परिचालन भएको देखिएको छैन् ।
विश्वमै कृषि क्षेत्रमा सहकारीको उपयोग गरिएको पाइन्छ । विश्वका ठूला ३ सय सहकारीहरुको कारोबार २०३५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा कृषि सहकारीहरुको अंश ३१.७ प्रतिशत रहेको छ (२०१७ को तथ्यांकको आधारमा सन् २०१९ मा वल्र्ड कोअपमोनिटरमा प्रकाशित) । चीन र क्यूवा जस्तो साम्यवादी मुलुकहरुले नीतिमा पुनरावलोकन गरेर जमिनहरु किसानहरुलाई फर्काएका छन् र कृषि सहकारीहरुको अभियान सञ्चालन गरेका छन् । चीनले सन् २००७ मा कृषि सहकारी ऐन जारी गरेको छ । सन् २०१३ देखि कृषि सहकारीको अभियान तिब्र पारिएको छ । अहिले करिब २३ लाख प्रारम्भिक कृषि सहकारीहरु सञ्चालनमा आई सकेका छन् ।
झण्डै १३ करोड किसानहरु कृषि सहकारी (उत्पादन) मा आबद्ध छन् । यी सहकारीहरुले उत्पादन गरेको उपजहरु बजारमा पुर्याउन करिब ३५ हजार मार्केटिङ सहकारीहरु छन्, जसको राष्ट्रिय सहकारी फेडरेशन पनि छ । पूँजिवादी मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाका २० लाख किसानहरु कृषि सहकारीमा जोडिएका छन् । सन्सकिट, ब्लु डाइमण्ड, ल्याण्ड ओ लेक, फ्लोरिडानेचुरल, डकोटा ग्रोअर्स, ओसनस्प्रे, सनमेडजस्ता प्रसिद्ध कृषि सहकारीहरु अमेरिकामा रहेका छन् । कृषि सहकारीले किसानहरु बाहेक २ लाख ५० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
सन् १९७० र ८० को दशकमा भारतको हरित र स्वेत क्रान्तिमा सहकारीको योगदान रह्यो । भारतमा झण्डै ८.५ लाख सहकारी संस्थाहरु छन् । यी सहकारीहरुमा २९ करोड मानिसहरु आबद्ध रहेका छन् । ९८ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीको पहुँच पुगेको छ । कृषि ऋण सहकारी संस्थाहरुको संख्या ९८ हजारको हाराहारीमा छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सहकारीको योगदान १३.४ प्रतिशत रहेको छ भने कृषि लघु वित्तमा २० प्रतिशत हिस्सा सहकारीको छ ।
कूल माग मध्ये ४० प्रतिशत रसायनिक मलको आपूर्तिमा सहकारी कारखानाको योगदान रहेको छ । चिनी र दुग्ध जन्य उत्पादनमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । इफ्को, अमुल जस्ता विश्व प्रसिद्ध कृषि सहकारीहरु भारतमा छन् ।